Motivation for success :: प्रेरक प्रसंग : अरूको पछि नलाग्नुहोस्
प्रेरक प्रसंग : अरूको पछि नलाग्नुहोस्
प्रकाशित मिति : शनिबार, पौस २४ २०७८
काठमाडौँ – एक पटक स्वामी विवेकानन्द एउटा सानो घरपालुवा कुकुर लिएर आफ्नो आश्रममा घुम्दै थिए।
त्यतिनै बेला अचानक एक युवक उनको आश्रममा आए र उनको पाउमा छोएर भने, ‘स्वामीजी, म आफ्नो जीवनबाट धेरै दुखी छु, म हरेक दिन प्रयास गर्छु तर आजसम्म मैले सफलता पाउन सकेको छैन। मलाई थाहा छैन, कि भगवानले मेरो भाग्यमा के आशिर्वाद दिनुभएको छ, के लेखिएको छ, यति शिक्षित भएर पनि असफल छु ।’
विवेकानन्दले तुरुन्तै युवकको समस्या बुझे। उसले युवकलाई भने, ‘भाइ ! मेरो यो कुकुरलाई टाढा कतै घुमाउन लैजाउ । त्यसपछि म तिम्रो प्रश्नको जवाफ दिनेछु।’
युवकलाई यो कुरामा अलि अनौठो लाग्यो तर उसले फेरि कुनै प्रश्न सोधेन र कुकुरलाई दौडाएर अगाडि बढे ।
कुकुरलाई लामो पैदल यात्रा गराएर युवक आश्रममा फर्किए । युवकको अनुहार अझै चम्किलो थियो तर सानो कुकुर थकानले भरिएको थियो ।
त्यसमा स्वामीजीले सोध्नुभयो, ‘किन भाइ, मेरो कुकुर कसरी किन थाक्यो ? तिमी धेरै शान्त देखिन्छौ। तिमी थाकेको छैनौ ?’
युवकले भन्यो, ‘स्वामीजी, म बिस्तारै हिडिरहेको थिएँ तर धेरै बेचैन थिएँ । म बाटोमा भेटेका सबै जनावरहरूको पछि दौडिरहेको थिएँ। त्यसैले यति टाढा पुग्दा पनि धेरै थाकेको थिइन् ।’
तब विवेकानन्दले भने, ‘भाइ, तिम्रो प्रश्नको उत्तर एउटै छ ! तिम्रो लक्ष्य तिम्रो छेउमा छ। यो तिमीबाट अलि टाढा छ। तर तिमी आफ्नो लक्ष्यलाई पछाडि छोडेर अन्तैतिर दौडिरहेका छौ ।’
जवाफ सुनेर युवक सन्तुष्ट भयो र आफ्नो गल्ती सच्याउन थाल्यो ।
हो, तपाईंको साथी फेसन डिजाइनर हो, त्यसैले तपाईं पनि त्यस्तै हुन चाहनुहुन्छ। तपाईलाई यसमा रुचि छ वा छैन कुनै मतलव छैन् । यसो गर्दा हामीले आफ्नो प्रतिभा गुमाउँछौं र जीवनभर संघर्ष गरिरहन्छौं। त्यसैले साथीहरू, अरूको पछि नलाग्नुहोस्। आफ्नो लक्ष्य आफै बनाउनुहोस् र लगनशीलतापूर्वक अनुसरण गर्नुहोस्।